Google mandefa ny Android Android O voalohany ary ireto ny vaovaony | Vaovao momba ny gadget
Villamandos | | Android, About us
Herintaona lasa izay, Google dia namoaka haingana ny kinova voalohany amin'ny Android N, izay nantsoina hoe Nougat. Ankehitriny ilay goavambe fikarohana, ary na eo aza ny zava-misy fa ny Android 7.0 dia lavitra ny fananana ny fanantenana andrasana, dia nandefa ny voalohany Android O Preview, izay indrisy fa tsy isika rehetra no afaka mitsapa malalaka.
Ary io dia tsy toy ny nataon'i Google tamin'ny kinova Android Nougat, izay azo alaina amin'ny OTA, miaraka amin'ny Android O izay mpandraharaha dia tsy maintsy misintona tanana ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ary mampiditra izany amin'ny fitaovany.
Amin'izao fotoana izao dia efa azo atao ny manandrana Android O, miaraka amin'ny zava-baovao rehetra ary koa ny lesoka rehetra satria aza hadinoina fa miatrika kinova famaranana isika, na izany aza dia tsy maintsy manana ianao Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Google Pixel, Google Pixel XL, na Google Pixel C. Eritreretina fa herinandro na volana vitsivitsy dia hisy ihany koa ny fanavaozana hizaha toetra amin'ny alàlan'ny Android Beta.
1 Ireo no zava-baovao ateraky ny Android O
1.2 Sary amin'ny sary (PiP)
1.3 Fanohanana marobe
1.4 Fikarohana fitendry
1.5 Fepetran'ny rindrambaiko ao ambadika
1.6 Tambajotra fampandrenesana ny manodidina
1.7 Miantso fanatsarana ny fampiharana
1.8 Ary maro hafa ...
2 Rahoviana no ho tonga amin'ny finday avo lenta Android Android?
Ireo no zava-baovao ateraky ny Android O
Avy amin'ny tanan'ny Android O, vaovao mahaliana be dia be no hahatratra ny fitaovantsika izay hojerentsika etsy ambany;
Miaraka amin'ny kinova Android OS vaovao Google dia nanisy fampiasa vaovao antsoina hoe fantsona fampandrenesana, izay ahafahantsika manangona ireo fampandrenesana momba ireo rindranasa ho vondrona maromaro. Mandra-pahitantsika azy sy hiainantsika azy dia tsy ho fantatsika ny tombony azony, fa ohatra hanampy antsika hanana fampiharana vaovao sy hamorona vondrona ny fampandrenesana momba ny fanatanjahantena sy ny teknolojia, nefa tsy mila mahita fampandrenesana ho an'ny vaovao tsirairay araka ny mitranga ankehitriny.
Sary amin'ny sary (PiP)
Ny rindranasa ampiasainay amin'ny Android O dia azo ampiasaina amin'ny sary amin'ny maody Sary na izay mitovy mba hanohizan'ny horonan-tsary milalao amin'ny varavarankely kely na dia miova amin'ny rindranasa hafa aza ianao. Efa azontsika jerena ao amin'ny YouTube ity fomba ity ary mahaliana ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany.
Ny fanohanana multi-efijery dia iray amin'ireo lahasa izay tsy nahitan'ny mpampiasa betsaka indrindra an'ireo fitaovantsika Android ary izao dia avy amin'ny tanan'ny Android O. Noho io antony io dia afaka mandefa hetsika amin'ny efijery lavitra isika.
Ny fitetezana fitendry dia zavatra efa misy amin'ny rafitra fikirakirana finday hafa ary na dia ny mpanamboatra sasany aza namboarina tao anatin'ny Android. Ankehitriny ity safidy ity dia azo ampiasaina amin'ny alalàn'ny taniny noho ny Android O.
Ny mpampiasa rehetra dia afaka mampiasa ny fivezivezena amin'ny zana-tsipika sy kiheba ao anatin'ireo fampiharana, zavatra izay tena mahaliana sy mahasoa indraindray.
Fepetran'ny rindrambaiko ao ambadika
Ny bateria sy ny fahaleovan-tena dia zavatra nifantohan'ny sain'ny Google tamin'ny Android farany, ary tsy ho afa-tsy izany ny Android O. Ary io dia miaraka amin'ny fanombohana ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa izay ho hitantsika hoe firy fameperana ny fampiharana mandeha any aoriana.
Ireo fameperana ireo dia mifantoka amin'ny faritra telo; Fampitana an-tsehatra, serivisy any aorina ary fanavaozana ny toerana, izay hianarantsika antsipiriany mandritra ny fotoana.
Tambajotra fampandrenesana ny manodidina
Ny fiasa WiFi vaovao dia hisy ihany koa ao amin'ny kinova Android vaovao, ohatra Neighborhood Aware Networking (NAN) izay hamela ny fampiharana hifampiresaka tsy misy fidirana eo anelanelany ary tsy misy fifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Miantso fanatsarana ny fampiharana
Na dia mahaliana kokoa an'ireo mpandraharaha aza io fampiasa io fa tsy ho an'ny mpampiasa dia tsy azonay jerena. Ary ity fanatsarana ity dia hifantoka amin'ny mpamorona afaka manangana ny sehatr'izy ireo manokana ho an'ny rindranasa antso izay azo fehezina ary koa araha-maso amin'ny alàlan'ny fitaovana misy efijery, toa ilay hitantsika amin'ny fiara rehetra.
Tsy ireo ihany no zava-baovao atolotry ny Android O antsika ary ny fisian'ireo sary masina mampifanaraka dia ho hitantsika ihany koa, izay efa hitantsika tao amin'ny Google Pixel, ny fanohanan'ny efijery chromatic avo lenta, ny fanohanana audio Bluetooh avo lenta codecs, fanohanana tsara kokoa ho an'ny loharano WebView ary koa API audio audio vaovao.
Rahoviana no ho tonga amin'ny finday avo lenta Android Android?
Google dia efa namoaka ny kinova voalohany an'ny Android O ho an'ny mpamorona, noho izany dia efa eo amintsika ny kinova vaovao an'ny rafitry ny fikaroham-pikarohana, na dia matetika aza dia tsy ny mpampiasa rehetra no afaka, ary tsy tokony hametraka izany amin'ny finday avo lenta.
Tsarovy izany ny fitaovana ahafahan'ny mpamorona mametraka Android O manaraka ireto;
Manantena aho fa hitombo ity lisitra ity rehefa mandeha ny herinandro, na dia mazàna aza i Google mazoto be mamoaka kinova Android prerelease ho an'ny fitaovana marobe.
Teo anelanelan'ny volana Mey sy Jona dia tokony hatsangana ny kinova voalohany, amin'ny volana Jona sy Jolay ho avy ny fahatelo, miaraka amin'ny kinova farany an'ny API ho an'ny Android Studio. Aorian'ny fahavaratra dia tokony hanana kinova savily voalohany, ary fotoana fohy aorian'ny fandraisantsika ny kinova farany.
Raha jerentsika ity tondrozotra ity izay naverimberina tao amin'ny Android Android rehetra, dia afaka mankafy ny Android O amin'ny faran'ny taona amin'ny fitaovana sasany amin'ny fomba ofisialy isika ary tsy mila mampiasa kinova voalohany izay amin'ny farany tsy avela ho rindrambaiko amin'ny fitsapana ary misy hadisoana sy hadisoana.
Ahoana ny hevitrao momba ireo fiasa vaovao izay hampidirin'ny Android O ary hahatratra ny fitaovantsika alohan'ny faran'ny taona?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Google mandefa ny kinova Android O voalohany ary ireto ny vaovaony
Hanamboatra smartwatch Android Wear koa ny mpanamboatra fiambenana lafo vidy Gc